Accueil > Gazetin'ny nosy > Hery Rasoamaromaka : Lasa mpanjaka manao jadona
Hery Rasoamaromaka : Lasa mpanjaka manao jadona
Sanatriavin’ny vava ve dia ho marina ny fanombanan’ny olona sasany hoe “mampiova olona ny fahefam-panjakana”? Mety ho marina fa tsy ny olona rehetra kosa angamba. Na ny fananana fahefana ara-bola koa aza dia mety mampiova. Toraka izany ny fananana fahefana ara-panahy…
Manamarika izany izahay satria raha mbola tsy Governoran’ny Faritra Aanlamanga i Hery Rasoamaromaka, dia toy ny olom-pirenena rehetra. Tsy niova izany na andro alahady fandehanany mivavaka (???) eny amin’ny fiangonana eny Ambohipotsy aza. Rehefa nahazo ny fahefam-panjakana anefa izy ka lasa Governoran’Analamanga, dia niova ny lehilahy. Lasa mpanao “didiko fe lehibe”. Vitany hatramin’ny manao “jadona” sy “kely tsy mba mamindro”.
Velon-taraina mantsy ny mponina manana fiarakodia eny amin’iny faritry ny tanàna ambonin’Antananarivo na “la haute ville” iny fa nanomboka tamin’ny alahady teo dia voarara ny mametraka fiara amin’ny sisin-dalana mihazo ny Fiangonan’Ambohipotsy. Ny antony, raha ny akon’ny fitarainan’ireo mponina, dia hoe “baiko satria hizotra mamonjy fiangonana eny Ambohipotsy ny Governoran’Analamanga”.
O rey vahoaka ô ! Hatrizay ela izay, vahoaka sesehena no mamonjy fiangonana ao Ambohipotsy, ary nisy manam-pahefana ara-panjakana na olona manana ny toerany manokana eo anivon’ny fiaraha-monina, mamonjy fiangonana ao isak’alahady, fa tsy nisy nahavita nanome baiko hanaisotra ny fiaran’ny mponina eny, nefa afaka mizotra tsy misy olana ny fiarany, fa nahoana no lasa misy izany fepetra izany rehefa ny Governora Rasoamaromaka no hiangona eny Ambohipotsy ? Tena ara-bakin-teny ny hoe “sao mihevi-tena ho mpanjaka aza Ingahy Governora, ka tsy refesi-mandidy ary afaka manao jadona araka izay tiany ?”
Ady tany eny Fenoarivo : Miziriziry amin’ny lainga marivo tototra Raholdina
Raholdina Betaitsofina : Mandrahona ho faty mpanao gazety indray
Toamasina : Teratany vahiny tsy maty manota
Inty sy Nday : Tsy Taolagnaro i Madagasikara
Siteny Randrianasoloniaiko : Nihaona tamin’i Marco Randrianisa tany Frantsa
Fisokafan’ny sisintany : Atakalo vola ny ain’ny vahoaka malagasy
Ntsay Christian : Hotsaraina amin’ny alatsinainy
Inty sy Nday : Ataovy laharam-pahamehana re ny vahoaka e !
Raharaha Sayda : Tsy nifona izany izahay tsy nitaingina